Fampiharana mihoatra ny 100 hapetraka amin'ny fizarana | Avy amin'ny Linux
Fampiharana mihoatra ny 100 hapetraka amin'ny fizarana anay
Ao amin'ny Wiki GUTL Nahita lisitry ny rindranasa faran'izay tsara izay tokony hodinihinay izahay handraisana azy ireo aorian'ny fametrahana ny fizarana ankafizinay.
Mifantoka indrindra ny lisitra Ubuntu, fa ireo rindranasa rehetra ireo dia azo ampiasaina amin'ny distro hafa. Betsaka ny hafa no tsy hita, fa eto isika dia efa manana maro amin'izy ireo.
2 Internet sy tamba-jotra
3 Birao sy sary
5 Fitaovana rafitra
Amarok- Iray amin'ireo mpilalao audio sy mpikarakara malaza indrindra ho an'ny GNU / Linux. Izy io dia manana endrika mitovy amin'izany ary amin'ny lafiny maro dia tsara noho ireo mpilalao malaza hafa izay tsy misy ao amin'ny Ubuntu, toy ny iTunes na Windows Media Player.
totem: mpilalao haino aman-jery multimedia izay tonga miaraka amin'ny tontolon'ny birao Gnome maimaim-poana. Miaraka amin'ireo plug-ins mifanaraka amin'izany dia afaka milalao CD, DVD ary CD Video ianao, ary koa ny endrika mahazatra amin'ny solo-sainanao, toy ny AVI, WMV, MOV ary MPEG.
Miro: mamela anao hijery fandaharana amin'ny fahitalavitra sy horonantsary alaina alaina mivantana amin'ny Internet, amin'ny alàlan'ny fantsona manokana, RSS, podcast, vlogs ary loharano hafa mitovy amin'izany.
VLC- Loharano misokatra, mpilalao haino aman-jery multiplatform afaka milalao saika horonan-tsary sy feo be mpampiasa be indrindra ankehitriny (MPEG, DivX, WMV, AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, MP3, OGG…).
Cinelerra: programa fanovana horonan-tsary miaraka amin'ny fahafahanao mamerina maka sary ary mamela anao hanafatra rakitra mivantana MPEG, Ogg Theora sy RAW, ary koa ireo endrika horonan-tsary nomerika mahazatra indrindra: avi sy Mov.
k3b- CD CD, Audio CD, fitaovana fandoroana horonan-tsary, kopia CD marina, fandoroana DVD, ary famoronana horonantsary horonantsary. Nomena ny fampiharana haino aman-jery tsara indrindra an'ny LinuxQuestions.org izy tamin'ny 2006.
MythTV: fampiharana izay miasa ho Media Center miaraka amina serivisy mahazatra toy ny fijerena horonantsary, DVD, sary, mozika, ary ireo manokana kokoa toa ny famoronana DVD, ny fanahafana ny console, ary ny fitetezana tranonkala, sns.
Gnomebaker- Fampiharana handoroana CD (data sy audio) ary DVD misy fahaiza-mirehitra sary ISO, mamorona CD audio avy amin'ny rakitra WAV, MP3 ary OGG, fanohanana ny firaketana multisession sns.
Google Earth: iray amin'ireo fampiharana Google tsara indrindra. Google Earth dia mamela anao handeha na aiza na aiza eto ambonin'ny tany hijerena sary zanabolana, sarintany, endrika an-tanety sy tranobe amin'ny 3D, ary hizaha vahindanitra aza.
Exaile: mpilalao audio izay mampiditra toetra isan-karazany mitovy amin'ny an'ny Amarok, ao anatin'izany ny fiasa toa ny fisehoana ho azy ny fonony CD, fitantanana fanangonana lehibe, fakana ny tononkira, fanohanana Last.fm, sns
QtTube: programa tsotra mamela anao hisintona horonantsary YouTube amin'ny endrika flv, amin'ny fampidirana fotsiny ny URL ny horonan-tsary izay tianay hivoaka ao amin'ny baran'ny adiresy an'ny fampiharana. Manual.
EasyTAG: programa misy sary hanovana ireo karazan-dahatsoratra ID3 amin'ny fisie audio. Miasa amin'ny endrika malaza indrindra: MP3, MP2, MP4 / AAC, FLAC, Ogg, MusePack ary Monkey's Audio.
XMMS- Mpilalao rakitra audio, mitovy amin'ny WinAmp, miaraka amina fanohanana MP3, OGG; WAV, WMA, FLAC, MPG ary MP4 ankoatry ny hafa.
Zattoo: fampiharana izay ahafahanao mijery fahitalavitra amin'ny solosainao nefa tsy mila karatra TV akory. Manolotra kalitaon'ny sary tena tsara, mandefa haingana ary mamela anao hijery fahitalavitra amin'ny varavarankely na ny efijery feno.
Last.fm: fampiharana ahafahanao mihaino radio amin'ny Internet. Izy io dia misy rafitra fanolorana mozika izay manangana mombamomba sy antontan'isa momba ny tsiro mozika, miorina amin'ny angon-drakitra nalefan'ny mpampiasa voasoratra anarana ao amin'ny serivisy.
Rhythmbox- Mpilalao feo tafiditra ho fampiasa ao amin'ny Ubuntu izay aingam-panahy tamin'ny voalohany iTunes. Ahitana fanohanana an'i Last.fm, scan ary alefaso alim-batana ho azy, tohano ny iPod sync, ampidino ny anaran'ny rakikira, ny mpanakanto sy ny tononkira avy amin'ny Internet, sns.
Avidemux: mpamoaka horonantsary maimaim-poana mahery vaika, natao hanamorana ny asan'ny fanapahana, ny sivana ary ny fisoratana anarana. Izy io dia manohana endrika be dia be, ao anatin'izany ny DVD, AVI, MP4, ary ASF. Mamela ireo tetikasa mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny script.
Cheese: programa izay ahafahantsika mampiasa ny webcam-nay haka sary sy horonan-tsary misy vokany hafa.
Xvidcap: mamela anao haka sary an-tsary ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny Desktop-nao. Tena marobe izy io, manana safidy maro sy fipetrahana kalitao, ankoatry ny fisafidianana ny karazan-dahatsary, ny isan'ny frame isan-tsegondra, sns.
F-toerana- Mpandamina sary sy sary natsangana tao amin'ny Desktop GNOME. Ankoatry ny fitantanana sy ny fanovana azy ireo dia azontsika atao ny mandamina azy ireo amin'ny alàlan'ny tag na labels, amin'ny filaharana araka ny fotoana, amin'ny toerana, sns.
DVD :: rip: fampiharana izay ahafahanao mamaky ny atin'ny DVD (toko, feo, dikanteny) ary mamorona horonantsary anaty rakitra iray, azo vakiana amin'ny solosaina rehetra, ary manana habe kely kokoa.
Feon-kira: CD ripper, izany hoe milalao kapila audio compact ary ahafahanao mamindra ny làlan-kaleha voafantina amin'ny solosainao, navadika ho WAV, OGG na MP3.
Audacity: fitaovana ahafahanao mirakitra, manova ary manodinkodina ireo rakitra am-peo nomerika amin'ny endrika isan-karazany.
MPlayer- Mpilalao haino aman-jery izay milalao ankamaroan'ny endrika: MPEG, VOB, AVI, OGG, ASF / WMA / WMV, QT / MOV / MP4, sns. Izy io koa dia mitondra ny safidy ho an'ny dikanteny.
GCStar: fampiharana izay ahafahanao mitantana ny angonao (boky, mozika, sarimihetsika, lalao, sns.), mitazona azy ireo ho voalamina tsara ary ho vonona amin'ny fangatahana rehetra.
SoundConverter: fitaovana ahafahanao manova ny rakitra audio ho endrika isan-karazany: WAV, FLAC, MP3, OGG.
gBrainy: misy karazana lalao samihafa hampiasana ny saina: piozila lozika, lalao fanaovana kajy ara-tsaina ary lalao fitadidiana.
GPixPod: fampiharana izay ahafahanao mandamina sary sy rakikira amin'ny iPod.
Music Applet: applet ho an'ny tontonana GNOME ahafahantsika mifehy ny hira izay milalao amin'izao fotoana izao, jereo hoe inona izany amin'ny alàlan'ny fijerena ny tontonana, jereo ny fotoana filalaovana mitovy na hanombanana izany aza.
Q DVD Mpanoratra: toolkit feno amin'ny famoronana DVD, bokotra, menus, index, toko, sns. Mamela ny mampiditra feo, horonan-tsary, sarimiaina ary sary.
Flash Player ary plugin ho an'ny Firefox- Fampiharana amin'ny endrika haino aman-jery iray mamela anao hilalao rakitra SWF noforonina tamin'ny Adobe Flash.
DVD95: fampiharana ahafahanao manova ny DVD9 ho 5 DVD4,7 GBRaha lazaina amin'ny teny hafa, mamela anao hampihena ny haben'ny DVD hatramin'ny antsasaky ny tsy hamoizanao kalitao izany.
XSane: fampiharana amin'ny fakana sary amin'ny alàlan'ny scanner. Tafiditra ao amin'ny fametrahana voalohany an'i Ubuntu izy io.
MeMaker: fampiharana novolavolaina tao amin'ny Python izay ahafahanao mamorona avatar haingana. Ny programa dia manana fitambaran-javatra izay azon'ny mpampiasa atambatra sy alainy hamoronana ny sarin'izy ireo.
Internet sy tamba-jotra
Pidgin: mpanjifa fandefasana hafatra haino aman-jery haino aman-jery afaka mifandray amin'ny tambajotra marobe (ao anatin'izany ny MSN) sy ny kaonty miaraka.
Emesene: klone mpanjifa fandefasan-kafatra marobe amin'ny MSN Messenger izay manandrana manana fifandraisana tsotra sy madio kokoa noho ny mpanjifa ofisialy, na dia misy aza ny fahafaha-manamboatra sy mampiasa tab kokoa hampisehoana ireo resaka samihafa.
Amsn: mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo izay mampiasa ny protokolony MSN. Manahaka ny endrika sy tsapan'ny MSN Messenger izy ary manohana ny maro amin'ireo fiasa ao aminy.
Thunderbird- Mpanjifa mailaka ao amin'ny fianakaviana Mozilla. Manohana i Thunderbird IMAP/POP, mail HTML, vaovao, RSS, tag, fanamarinana tsipelina namboarina, fanohanana ny fanitarana sy ny hoditra, ny motera fikarohana, ny encryption PGP, ny sivana spam ...
Liferea- Mpanangona vaovao ho an'ny feed vaovao an-tserasera mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny endrika fahana, ao anatin'izany RSS, RDF ary Atom. Miezaka i Liferea ho haingana, mora ampiasaina ary mora mametraka agregator.
Firefox- Browser multiplatform Internet novolavolain'i Mozilla.
amule: programa fizarana rakitra miampita sehatra. Izy io dia manohana ny ankamaroan'ny asan'ny eMule. Ho fanampin'izay, misy mpizara Web tsy miankina iray tsy miankina sy fantsom-pifandraisana izay misy hifandraisany amin'ny aMule mihazakazaka amin'ny tambajotra.
Azureus- Mpanjifa BitTorrent voasoratra any Java miaraka amina interface tsara sy mahafinaritra ary manome fifehezana lehibe ny fampidinana.
CheckGmail: rindranasa izay ampidirina ao amin'ny bara fiasa ary manamarina raha misy mailaka vaovao ao amin'ny kaonty Gmail.
safo-drano- Mpandrindra fampidinana falehan-driaka haingana sy maivana izay mifangaro ao amin'ny Gnome. Izy io dia manohana tondra-drano maromaro tsy misy fahasarotana, ary mandamina ny fampahalalana amin'ny takelaka.
http://www.gnome.org/projects/evolution/Evolution: mailaka mpanjifa izay napetraka ao amin'ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny default. Mihoatra ny mpanjifa mailaka, fitaovana ho an'ny vondrona feno izay mamela antsika hitantana fifandraisana, asa, naoty ary kalandrie.
Skype: programa mampiasa teknolojia P2P afaka miresaka amin'ny olona hafa na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Izy io koa dia ahafahanao miantso ny laharana an-tanety amin'ny vidiny mihena.
Teamspeak: fampiharana mpanjifa / mpizara mamela ny fifandraisana amin'ny Internet amin'ny Internet. Io dia ahafahanao mampiasa fantsom-pifandraisana samihafa sy manondro hetsika ampifandraisina amin'izy ireo amin'ny fitambarana lehibe.
Andian-tory: mpizaha ara-tsosialy izay misy fitaovana fitantanana bilaogy, fitantanana feed (RSS, Atom), tsoratadidy natsangana tao amin'ny del.icio.us sy Flickr, na ny fahaizana mizara sary.
Transmission: mpanjifa BitTorrent tena maivana miaraka amina interface tsotra sy intuitive amin'ny motera mahomby sy multiplatform.
Filezilla: mpanjifa FTP Izy io dia ahitana ny baiko sy ny fiasa rehetra antenainao amin'ny programa misy ireo toetra ireo. fanohanana FTP, SFTP ary FTP amin'ny SSL.
GrNotify: programa kely napetraka ao amin'ny biraon'ny GNOME ary mampitandrina anao amin'ny vaovao tonga amin'ny kaonty Google Reader anao.
XChat: iray amin'ireo mpanjifa open source malaza indrindra an'ny IRC ho an'ny Linux. Mampiasa tabilao na flaps izy io, manana fanohanana amin'ny fifandraisana amin'ireo mpizara maro IRC, filalaovana feo amin'ny fisehoan-javatra sasany, fanohanana plugins sy script ivelany, fifandraisana amin'ny programa hafa toa ny XMSS, sns.
Ekiga Softphone: Chat, videoconferansa ary resaka amin'ny alàlan'ny VoIP. Tafiditra ao amin'ny fametrahana voalohany an'i Ubuntu izy io.
Birao sy sary
Dia: tonian-dahatsoratry ny kisarisary ahafahanao mamorona sy manova ny sary sy ny sary ara-teknika (mikoriana, mandeha amin'ny herinaratra, CISCO, UML…). Nahazo aingam-panahy avy amin'ny programa Windows Visio 'Visio'.
LibreOffice: rindrambaiko maimaimpoana sy suite biraon'ny loharano misokatra ho an'ny fizarana maimaimpoana izay ahitana fitaovana toy ny fanodinana teny, takelaka, fampisehoana, fitaovana fanaovana sary ary rakipeo.
Mpanoratra: mpamoaka lahatsoratra an-tsoratra mahery vaika azon'ny plugins voasoratra amin'ny Python izay mamela ihany koa ny fanovana lavitra ny rakitra (ftp, ssh, samba, ...).
Inkscape- Fitaovana sary ho an'ny sary vector SVG. Ny mampiavaka ny SVG Anisan'izany ny endrika, làlana, soratra, fantson'ny alpha, fanovana, gradients, fanitsiana node, sns.
Kompozer: mpamoaka pejy web Fandrarian-dahatsoratra marevaka ao anatin'izany ny fiasa toa ny fitantanana ny asa tetikasa, ny mpanjifa FTP ampidirina sy tohana ho an'ny singa mahazatra rehetra: frame, endrika, latabatra, modely famolavolana, CSS, Etc.
PDFEdit: azo atao ny manitsy ny antontan-taratasy amin'ny PDFEdit PDF. Azontsika atao ny manova zavatra PDF manta (amin'ny maha mpampiasa mandroso), manova lahatsoratra na manetsaka sakana.
Glipper: fitaovana hitantanana ny solaitrabe. Tena ilaina sy azo ampiharina, satria tsy toy ny Windows izay tadidy ao anaty fitadidiana, ao amin'ny Linux rehefa mikatona ny fampiharana izay nakana ny angon-drakitra dia very ireo.
fanakona-masoandro: tontolon'ny fampandrosoana multiplatform sy fiteny marobe amin'ny fampandrosoana ny fampiharana.
Tomboy- Fampiharana iray handraisana naoty eo amin'ny birao GNOME. Tena applet tontonana mora ampiasaina tokoa izay ahafahantsika mandamina ny fampahalalana mifandraika isan'andro.
Scribus- programa famoahana birao izay manome fahombiazana lehibe amin'ny famoronana fanontana solosaina.
Gimp- Fitaovana fanovana sary misy fiasa mitovy amin'ny Photoshop. Misy kinova GIMP azo entina izay azo entina ary ampiasaina mivantana avy amin'ny memo USB tsy mila apetraka amin'ny solosaina.
Evince: mpijery antontan-taratasy ho an'ny tontolon'ny birao GNOME. Azonao atao ny mijery ireo fisie amin'ny endrika PDF ary PostScript.
Mozilla Sunbird: kalandrie izay manatanteraka ny asan'ny fandaharam-potoana, lisitry ny laharana, kalandrie misy fanairana, fandaharam-potoana amin'ny asa, fanendrena, tsingerintaona ary hetsika lehibe hafa.
Compiz Fusion- Fanangonana plugins sy rafitra fikirakirana ho an'ny mpitantana ny famoronana varavarankely Compiz, ho an'ny rafitra fikandrana X.
AllTray: mamela anao manampy fampiharana amin'ny faritra fampandrenesana na dia voalaza aza fa tsy manana ny fanohanan'ny teratany azy ny fampiharana (toy ny Evolution, Thunderbird, terminal, ...).
Ila mamiratra: fampiharana izay ahafahanao manendry hetsika azo ampiorina hitranga rehefa tavela eo amin'ny zoron'ny efijery ny totozy (ahenao ny habetsahana, atombohy ny screensaver, vonoy ny rafitra sns.).
Kiba-dock- Dock (bara hitsin-dàlana) ary azo antoka fa ny mpandefa fampiharana Linux malaza indrindra. Izy io dia manana fizika manokana antsoina hoe "Akamaru", izay manome vokany toy ny rojo ary ny rohy no mpandefa azy.
Avant Window Navigator: dock hafa izay mipetraka eo amin'ny farany ilan'ny birao. Azontsika atao ny manamboatra endrika tena ilaina amin'ny seranan-tsambo: misafidy raha manarona ny dock ny varavarankely rehefa ampitomboina, miafina ho azy izy io, ireo programa miseho ao amin'ny bara sy ny sariny ...
GNOME-DO: mpandefa fampiharana izay ahafahanao mandefa ireo rindranasa tianao indrindra, fifandraisana Evolution, tsoratadidy Firefox, fisie,…. haingana (solon'ny Alt + F2) ary tsy mampiasa ny totozy.
Takelaka: ny takelaka dia fampiharana kely voasoratra amin'ny Python izay ampiasaina amin'ny Compiz ary ampiasaina handravahana ny birao na hahazoana vaovao haingana. Toetrandro, famantaranandro, kalandrie sns. misy ny sasany amin'ny takelaka misy.
GNOME Art: fampiharana izay ahafahantsika manamboatra ny endrik'ireo singa hita maso ao amin'ny birao GNOME, misintona loharanom-pahitana vaovao amin'ny alàlan'ny interface tsotra.
Wallpapoz: rindranasa mamela anao manampy mihoatra ny iray afovoany birao isaky ny birao tsirairay, ary mamela ny ao aoriana hihodina rehefa mandeha ny fotoana.
Yakuake: emulator terminal aingam-panahy avy amin'ny terminal ny horonantsary horonantsary horonantsary: ​​rehefa tsindrio ny bokotra (amin'ny alàlan'ny default F12, fa azo ovaina izy) dia hita eo amin'ny efijery mihetsiketsika avy eo an-tampon'ny birao ny console, ary rehefa tsindrioo indray dia manjavona izy.
VMWare: VMware dia mamela anao hametraka milina virtoaly maromaro ao amin'ny rafitra fiasa nefa tsy manampy karazana fitaovana ary tsy mila manao partitions.
Gparted: Tonian-dahatsoratra GNOME. Ity fampiharana ity dia ampiasaina hamoronana, hamafana, hamerenana ny habeny, hijerena ary handika fizarazarana, ary koa ny rafi-drakitra.
XAMPP- Fonosana izay misy ny server MySQL database, Apache web server, ary mpandika teny amin'ny fiteny scripting: PHP.
Divay: fampiharana indray ny API Windows (Win16 sy Win32), izany hoe, tetikasa mamela ny programa natao ho an'ny Windows hoentina eo ambanin'ny rafitry ny fianakaviana Unix. Manual
Conky- Rindrambaiko birao azo ovaina sy mahery vaika natao mba hanomezana fanazavana momba ny satan'ny rafitra.
HardInfo: fampahalalana sy fitaovana fanaovana benchmarking izay ahafahanao mahazo vaovao momba ny fitaovan'ny solo-sainao.
APTonCD: fitaovana an-tsary izay ahafahanao mamorona CD na DVD iray hafa (azonao atao ny misafidy azy) miaraka amin'ireo fonosana alaina amin'ny alàlan'ny apt na aptitude, ka mamorona repository finday azonao ampiasaina amin'ny solosaina hafa.
Mpanomboka Startup: fampiharana sary izay ahafahanao mitantana ny masontsivana sy ny fikirana Grub isan-karazany.
Firestarter: firewall ampiasain'ny rafitra Netfilter (iptables / ipchains) tafiditra ao amin'ny kernel Linux. Izy io dia manana interface graphique hanamboarana ny fitsipika firewall sy safidy hafa.
Wireshark: mpanadihady momba ny protokolone izay nampiasaina handinihana sy hamahana olana amin'ny tambajotram-pifandraisana ho an'ny fampandrosoana lozisialy sy ny protokolola ary ho toy ny fitaovana didaktika ho an'ny fanabeazana.
BlueProximity: fampiharana izay mahatsikaritra ny fisian'ny fitaovana Bluetooth ampiarahina aminy ary rehefa mihetsika izy dia mampihetsika ny screensaver ary afaka manakana ny fitaovana.
OpenSSH: napetraka amin'ny rindranasa izay mamela ny serasera voarindra sy manomboka ireo session amin'ny milina lavitra mampiasa ny protokolola SSH.
Alarm Clock: rindranasa miasa ho fanairana hampahatsiahy antsika ireo fotoana nifanarahana, asa na fivoriana mety hadinontsika.
Gmount ISO: fampiharana sary manampy antsika hanangona sary mora foana ISO, toy ny hoe ao amin'ny CD / DVD an'ilay masininay izy ireo.
Tracker- Fitaovana fikarohana rakitra tafiditra ao anaty Ubuntu. Safidy maimaimpoana sy mahery ary maivana ho an'ny Beagle sy Google Desktop io.
VNC: programa miorina amin'ny rafitry ny mpizara mpanjifa izay ahafahantsika mifehy ny solosaina lozisialy amin'ny alàlan'ny solo-sainan'ny mpanjifa.
Screen: fitaovana fitantanan-draharaha amin'ny maody an-tsoratra izay ahafahanao manana console maromaro misokatra ao anaty terminal.
Virtual Box: programa virtualization izay ahafahanao mihazakazaka rafitra miasa hafa toy ny fizarana GNU / Linux na Windows an'ny Windows.
Skrip nautilus: rindranasa kely izay azontsika atao avy amin'ny mpikaroka rakitra GNOME. Misy karazan-tsoratra samihafa: amin'ny fikirakirana sary, ho an'ny rakitra audio, sns.
Rakoto: console izay manana mampiavaka manokana sy azo ampiharina: mizara konsoly hafa. Izany hoe, manana varavarankely izay mandrakotra ny console anay voalohany izahay, fa io varavarankely io dia azo zaraina ho consoles roa, ary ny tsirairay amin'izy ireo ho roa hafa.
Kalamara- Mampihatra mpizara proxy sy daemon pejy web. Izy io dia manana fitaovana isan-karazany, manomboka amin'ny fanafainganana ny lozisialy, ny fangatahana miverimberina hatrany DNS ary fikarohana hafa ho an'ny vondron'olona mizara loharanom-pahalalana, eny fa na ny cache aza amin'ny Internet, ary koa ny fanampiana fiarovana amin'ny sivana ny fivezivezena.
fehezo: ny mpizara DNS matetika ampiasaina amin'ny Internet (DNS dia ilay protokol izay tompon'andraikitra amin'ny fampifangaroana ireo anaran-tsehatra amin'ireo adiresy IP).
vsftpdMora ny mametraka sy manamboatra mpizara Linux ftp. Manoro hevitra an'i Debian sy Ubuntu izy io ary manana fikirakira tena tsotra amin'ny alàlan'ny fisie tokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Fampiharana mihoatra ny 100 hapetraka amin'ny fizarana anay
rogertux dia hoy izy:
Ao amin'ny sehatra Multimedia dia ampiako ao amin'ny foibe multimedia XBMC; raha mety ny dikan-teny 11
Mamaly an'i rogertux
herim-po dia hoy izy:
KISS mahantra raha tsy maintsy apetraka daholo izany hahahaha
Tina Toledo dia hoy izy:
Ao amin'ny fizarana Internet sy tamba-jotra tokony hanafoana isika ondry. Izy io dia navigateur tena tsara, nampiasaiko betsaka izy io noho ny fampidirana azy Photobucket, fa tsy misy intsony ... eto misy fampahalalana bebe kokoa momba izany.
Fanontaniana Elav NAHOANA GIMP ao amin'ny fizarana Multimedia?
Valiny tamin'i Tina Toledo
Tsy tsikaritro izany TinaEny, noraisiko ny atiny toy ny tao amin'ny Wiki. Misaotra amin'ny vaovao.
Tongasoa eto ianao, zazalahy….
Raha ny fanazavana, tsy hitako ny qBittorrent ao amin'ny lisitry ny Internet sy tamba-jotra...
qbitorrent no mpanjifa cross-platform tsara indrindra :).
Tiako i Ktorrent
Aleoko safo-drano 😀 satria mbola tsy manala ny tenako amin'ny gnome aho
Erithrym dia hoy izy:
Ho an'ny fanovana ny mari-peo dia mampiasa MusicBrainz Picard aho, izay raha tsy diso aho dia ao amin'ny repos ihany koa. Izy io dia sehatra fiampitana ary mamela anao hanafatra mozika koa.
Efa lany andro ihany koa io ao amin'ny efitrano fiasan'ny birao, izay tokony ho Libreoffice 😉
Mamaly an'i Erithrym
Varatra dia hoy izy:
Tsy ao amin'ny sehatra Multimedia i KdenLive ... hitomany aho: '(
Mamaly an'i Thunder
Afaka ampiana ny olona .. Fa satria mbola tsy nampiasa azy io dia mila rohy sy famaritana 😀
tavo dia hoy izy:
Ny rohy mankany amin'ny pejinao:
Ny rohy mankany amin'ny boky torolàlana:
Mamaly an'i tavo
Ary ny famaritana? 😛
Mitadiava azy fa aza somary alika (alika = kamo)
! AHA! Ka Firestarter ho an'ny iptables, noho izany aza ilaozana ny Gufw. Safidy faharoa miaraka amin'i Hardinfo dia i-nex: https://launchpad.net/i-nex
Nampiasa ny Firestarter aho, avy eo ny firehol ... Efa mampiasa iptables mivantana aho, amin'ny farany dia 'azo antoka' kokoa izy io, satria azonao antoka tanteraka fa voasoratra mazava izay tadiavinao.
Dgabo dia hoy izy:
Tsy hitako ny rindranasa dobo Kiba, tiako ny manandrana azy fa tsy hitako izy, toa tapaka io 🙁
Valio amin'i Dgabo
truko22 dia hoy izy:
Ny rindranasa KDE dia vitsy raha ampianao: Ktorrent, konversation, krita, Kdenlive, clementine, choqok, QTcreator kamera, Marble, krusader, smb4k, digikam Tsy tadidiko bebe kokoa sy peazip mahaliana hafa, playonlinux, Jdownloader. Apper koa dia mandray ny distro kde.
Mamaly an'i truko22
Gabriel Gonzalez dia hoy izy:
Hanampy fampiharana ho an'ny fanovana tag aho sy ny anana hafa ho an'ny mp3:
tena tsara eh intuitive farafaharatsiny ho ahy fa efa nanandrana sasany tamin'ny fanangonana mp70 mihoatra ny 3gb mpXNUMX aho no nanome ahy ny vokatra tsara indrindra, arahaba Gabriel
Mamaly an'i gabriel gonzalez
Elynx dia hoy izy:
Tsara, misaotra betsaka tamin'ny lisitra programa maro be!
Valiny tamin'i Elynx
Misy olona iray tsy hita ho solon'ny IDM sy / na Mipony ankoatry ny JDownloader mavesatra, izay mandany loharano ary miasa fotsiny rehefa hiraina.
Ny KGet dia kodiarana fotsiny mba hidina raha ny hafa kosa jet.
Io ihany no zavatra tsy haiko momba ilay W $ maharikoriko.
ny moana dia hoy izy:
Lisitra tena tsara, na dia tsy nahita programa mety hisolo ny wirecast na ny mpamokatra ustream aza aho, ary izany indrindra no antony tsy maintsy hampiasa windows, raha misy aminareo mahalala izay mahasolo ireo programa ireo, dia ho feno fankasitrahana aho .
Mamaly an'i elmudo
CherryTree, http://www.giuspen.com/cherrytree/ izay ampiasako ho "vatan-kazo" amin'ny zava-drehetra; naoty, boky torolàlana, fandaharam-potoana sns. Izy io dia mamonjy ny zava-drehetra ao anaty rakitra iray ary voalamina amin'ny endrika hazo.
PuddleTag, http://puddletag.sourceforge.net/ ny tsara indrindra anananao amin'ny tag tanteraka ny fanangonana mozikao.
HandBrake, http://handbrake.fr/ ny tsara indrindra amin'ny famoretana amin'ny h264.
Master PDF Editor, http://code-industry.net/pdfeditor.php ny zavatra azo sotroina indrindra izay misy ao amin'ny Linux hanovana PDF. Tsy ilaina ny fametrahana
gThumb, https://live.gnome.org/gthumb hitantana amin'ny fomba mahomby ny fanangonana sary anao
Gnome DVB (miaraka amin'ny plugin Totem) https://live.gnome.org/DVBDaemon ny fomba tsara indrindra hijerena sy handaketana ny fahitalavitra ao Gnome.
…. ary manantena aho fa hahatadidy zavatra hafa bebe kokoa.
Adolfo Rojas dia hoy izy:
Heveriko fa tena lehibe ilay fampiharana, indrindra ny fananana ny baiko APPS hitehirizana sy hanakanana ny olona tsy hampiasa ny menio sary, Mahafinaritra!
Valiny tamin'i Adolfo Rojas
fihetseham-po dia hoy izy:
Izaho dia nitady zavatra toa an'i CherryTree, misaotra betsaka
Mamaly an'i ToÑo
Salama, lahatsoratra tena tsara, raha te hametraka fampiharana avy amin'ny terminal Ubuntu ianao dia ireto no soso-kevitra indrindra:
Valiny tamin'i Julio
Charles-- dia hoy izy:
Tena tsara, misaotra betsaka, tena ilaina tokoa izay tsy hisalasalanao hametraka.
Valiny tamin'i Carlos--
McVale dia hoy izy:
Mila programa hanovana horonantsary aho fa azo apetraka litera ary natao ho an'ny gnome !!!!!
Valiny tamin'i McVale
FDclone: ​​Mpitantana rakitra maivana
Soso-kevitra: baikon'ny dd miaraka amin'ny bara fandrosoana